क्लाउड-आधारित कार्यप्रवाह को लागी भण्डारण NAB देखाउनुहोस् समाचार | २०२० एनएबी शो मिडिया पार्टनर र एनएबी शो लाइभको निर्माता। प्रसारण ईन्जिनियरिंग समाचार
घर » सामाग्री रचना » क्लाउड-आधारित कार्यप्रवाहको लागि भण्डारण
टम कफ्लिन, कफलीन एसोसिएट्स, ईंक। www.tomcoughlin.com
COVID-19 को प्रकोपको परिणामस्वरूप २०२० रद्द भयो NAB शो लस भेगासमा शारीरिक घटनाको रूपमा। यसको सट्टा, बिभिन्न विक्रेताहरू जसले प्रदर्शन गरेका थिए र डिजिटल भण्डारण प्रणालीहरू र विभिन्न मिडिया र मनोरन्जन अनुप्रयोगहरूको लागि सफ्टवेयरमा प्रस्तुत गर्थे एक आभासी घटनामा सरे, अप्रिलको अन्तमा र जून २०२० सम्ममा NAB देखाउनुहोस् व्यक्त (nabshow.com/express/).
धेरै उद्योग पेशागतहरूको टाढाको कामको चालमा प्रकाश, क्लाउड-आधारित कार्यप्रवाह विशेष प्रासंगिक भएको छ। हालको क्वारेन्टाइनले क्लाउड-आधारित कार्यप्रवाहहरूमा प्रवृत्तिलाई तिव्र बनाएको छ, जुन सम्भवतः हामीले फेरि सँगै काम गरे पनि जारी रहनेछ। क्लाउड बिना, धेरै M&E पेशेवरहरू काम बिना नै हुन्।
क्लाउड-आधारित कार्यप्रवाहहरू COVID-१ p महामारी भन्दा पहिले नै लोकप्रियतामा बढ्दै थिए। २०२० HPA रिट्रीटमा, क्लाउड वर्कफ्लो विकल्पहरू प्रदान गर्ने अग्रणी कम्पनीहरूका साथै अनुभवी निर्देशकहरूले प्रत्यक्ष क्लाउड-आधारित वर्कफ्लो छोटो भिडियो सिर्जना गरे, हराएको लेडरहोसेन.
मिडिया र मनोरन्जनमा डिजिटल भण्डारणमा मेरो २०१ 2019 वार्षिक रिपोर्टमा, मैले मेडिया र मनोरन्जनलाई समर्थन गर्न क्लाउड भण्डारणमा उल्लेखनीय बृद्धि हुने अनुमान गरें (तल हेर्नुहोस्।)। २०२० को रिपोर्टमा क्लाउड भण्डारणको वृद्धि महामारीको सुरूवात पछि बढेको प्रयोगको कारणले अधिक हुनेछ, र त्यो अनुभवको आधारमा रिमोटको काम र क्लाउड स्ट्रोजमा द्रुत बृद्धि हुनेछ। महामारीले क्लाउड प्रयोगको एक्सेलेटरको रूपमा काम गरेको छ।
यो लेखले क्लाउड-आधारित कार्यप्रवाहको लागि विकासहरू, र विशेष गरी डिजिटल भण्डारण समाधानहरूमा यी कार्यप्रवाहहरूलाई समर्थन गर्दछ। नोट गर्नुहोस् कि यद्यपि धेरै कम्पनीहरू जसले २०२० एनएबीमा प्रदर्शन गरेका थिए भर्चुअल घटनाहरूमा भाग लिइरहेका छन्, यी घटनाहरू समयसँगै अप्रिलदेखि जून २०२० सम्म फैलिएका छन्। म लेखको समयमा मैले फेला पारेका कुराहरूको बारेमा यस लेखमा कुरा गर्नेछु। ।
अमेजन वेब सेवाहरु (AWS) थियो यसको आफ्नै NAB आभासी घटना, वितरण को माध्यम बाट सामग्री निर्माण र पोष्ट उत्पादन बाट टाढाको workloads मा केन्द्रित।
धेरै M&E कम्पनीहरूले AWS सेवाहरू प्रयोग गर्दै आएका छन् जसमा टर्नर, अनटोल्ड, रक र रोल हल अफ फेम, फक्स, एचबीओ, हटस्टार र यूरोपोर्ट छन्। AWS companies कम्पनीहरु मध्ये एक थियो क्लाउडबेस मिडिया सप्लाई चेन को सामग्री इन्जेस्ट, व्यवस्थापन र डेलिभरीका लागि ईन्जिनियरि E EMMY पुरस्कार।
AWS लेटेन्सी संवेदनशील मिडिया वर्कलोडको साथ मद्दत गर्न तीन नयाँ सेवाहरू प्रदान गर्दैछ। यी AWS स्थानीय जोन, AWS चौकी र AWS Waveleight हो। स्थानीय अंचल कम AWS सेवाहरू को साथ तपाईंको अन्तिम प्रयोगकर्ताहरू नजिक ढिलाइ प्रदान गर्दछ। AWS outposts एक संकरीत क्लाउड अनुभव को आधार मा वा क्लाउड मा तपाइँको डेटा केन्द्र मा AWS उत्पादन को एक र्याक ल्याउँछ। AWS तरंगदैर्पणले मोबाइल अनुप्रयोग विकासकर्ताहरूलाई एकल-अंक मिलिसेकेन्ड विलम्बताका साथ अनुप्रयोगहरू डेलिभर गर्न सक्षम गर्दछ।
AWS ले विन्डोज वा लिनक्सको लागि भर्चुअल वर्कस्टेशन्स प्रदान गर्दैछ जसमा NVIDIA T4 टेन्सर कोर CPUs र NVIDIA क्वाड्रो वर्कस्टेशनमा समान लागतमा पहुँच समावेश छ। यसले AWS मा रेन्डरिंग प्रस्ताव गरिरहेको छ कि त हाइब्रिड वा पूर्ण सार्वजनिक क्लाउडको रूपमा AWS थिंकबक्स डेडलाइन वा तपाइँको मनपर्ने रेन्डर व्यवस्थापन समाधान प्रयोग गर्दछ। दुबै उत्पादनहरू भुक्तानको लागि प्रस्ताव गरिएको छ यसको प्रयोगको रूपमा।
२०१ 2019 मा फक्सले भने कि यसले केबलको लागि AWS प्रयोग गर्दछ र उपग्रह यसको केहि उत्पादन सुविधाहरू र AWS स्थानीय जोनमा AWS चौकी प्रयोग गरी प्रसारण गर्दछ। तलको छविले देखाउँछ कि AWS प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष प्रसारणको भविष्य के देखिन सक्छ उत्पादन नियन्त्रण कोठा क्लाउडमा सर्दा।
AWS ले कम विलम्बता सामग्री वितरणमा AWS इलिमेन्टल मीडियास्टोर (मिडिया अनुकूलित भण्डारण र मूल स्रोत) को प्रयोग गरेर पनि छलफल गर्‍यो। एनएबी २०२० को लागि एडब्ल्यूएसले इलिमेन्टल लाइभ चुन्क ट्रान्सफर, DRM समर्थन र सर्वर साइड विज्ञापन सम्मिलनको प्रस्ताव गर्‍यो। कम्पनीले यो पनि भन्यो कि यसको एलिमेन्टल मेडिया कन्वर्ट र एक्सेलेरेटेड ट्रान्सकोडिंगले आज जटिल AV2020 ईन्कोडि todayलाई सम्भव बनाउन सक्छ। तलको चित्रले कसरी AWS Elemental MediaLive, साइट मिडिया इन्जेस्ट बक्स, प्रत्यक्ष भिडियो पहुँच प्रदान गर्न सक्छ भनेर देखाउँदछ।
कुमुलो हाइब्रिड क्लाउड फाइल भण्डारण र डाटा सेवाहरू र प्रस्तावहरू प्रदान गर्दछ केही भर्चुअल एनएबी भिडियोहरू। M&E उद्योग एक हो कुमुलोको लक्षित बजारहरु। कम्पनीले घोषणा गर्‍यो कि Adobe Premiere Pro र प्रभाव पछि, सँगै मिलेर कुमुलोफाईल सेवाहरू, स्टुडियोमा कार्यस्थानका रूपमा प्रदर्शन, पहुँच र कार्यक्षमताको समान तहको क्लाउड भण्डारण प्रयोग गरेर भिडियो फुटेज सिर्जना र सम्पादन गर्न सिर्जनात्मक टोलीहरूलाई सक्षम गर्नुहोस्। कुमुलोको क्लाउडस्टुडियोले चालु प्रोजेक्टहरूलाई अनुमति दिन्छ जुन परम्परागत रूपमा शारीरिक उत्पादन साइटमा हार्डवेयर-बाउन्ड भएका दुबै AWS र GCP प्लेटफर्महरूमा सार्वजनिक क्लाउडमा।
विश्लेषकहरूको लागि एक ब्रीफिंगमा कुमुलो कसरी बारेमा बढी कुरा कुमुलो, Adobe र Teradici सहयोगी हाइब्रिड क्लाउड सम्पादन प्रदान गर्न सक्दछ तल चित्रमा देखाइए जस्तै। यस संयोजनले असीमित स्केलि provide, उच्च प्रदर्शन सहयोगी भिडियो सम्पादन, दृश्य प्रभावहरू र विश्लेषणहरू र दृश्यता प्रयोगको साथ बर्ड रेन्डरिंग प्रदान गर्न सक्षम भयो। कुमुलो विश्लेषणात्मक उपकरणहरू।
क्वान्टम यसको StorNext फाइल प्रणाली र डाटा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको साथ घोषणा गरिएको बृद्धि जुन कुनै क्लाउड र वस्तु स्टोरको लागि उल्लेखनीय सुधारिएको पढ्ने र लेख्ने गतिको साथ क्लाउड सामग्रीलाई अधिक पहुँचयोग्य बनाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो। नयाँ StorNext 6.4 सुविधाहरूले हाइब्रिड-क्लाउड र बहु-क्लाउड प्रयोग केसहरू सक्षम पार्न मद्दत गर्दछ, मिडिया र मनोरन्जन र अन्य डाटा गहन वातावरणको लागि अधिक लचकता प्रदान गर्दछ।
StorNext 6.4 ले क्लाउड सामग्री अधिक सजीलो पहुँचयोग्य बनाउन नयाँ वर्णन हाइब्रिड-क्लाउड वर्कफ्लो सक्षम गर्न स्व-वर्णन गर्ने वस्तुहरू समाहित गर्दछ। ग्राहकले StorNext फाइल प्रणालीमा फाईलहरू लेख्दछ, त्यसपछि नीतिमा आधारित StorNext सार्वजनिक वा निजी क्लाउडमा फाइलहरू प्रतिलिपि गर्दछ, अतिरिक्त वस्तु मेटाडेटा समावेश गर्ने विकल्पको साथ। गैर- StorNext ग्राहकहरू र क्लाउड-निवासी प्रक्रियाहरूले अब वस्तुहरू सिधा पहुँच गर्न सक्दछन्, नयाँ विस्तारित मेटाडेटाको लाभ उठाउँदै। थप रूपमा, StorNext 6.4 को बहु-थ्रेडेड पुट / गेट अपरेसनहरूले सिंगल थ्रेडेड अपरेशन्सको तुलनामा 5X बाट 7X सुधार प्रदान गर्दछ।
नेट अनुप्रयोगले यसको आफ्नै गरिरहेको छ २ जून जुन भर्चुअल एनएबी घटना। उनीहरूको कार्यक्रमले उनीहरूको समाधान प्रदर्शन गर्दछ, साझेदारहरूसँग नयाँ स्तरको प्रदर्शन र दक्षता प्रदान गर्न र मिडिया डाटा फेब्रिक सिर्जना गर्न जसले M&E कार्यप्रवाह समर्थन गर्दछ।
डेल टेक्नोलोजी पनि थियो भर्चुअल घटना यसले मिडिया र मनोरन्जन कार्यप्रवाहको लागि उनीहरूको गणना र भण्डारण उपकरणहरू प्रदर्शन गर्‍यो र साथसाथै सहयोगी कार्यप्रवाह सक्षम गर्नका लागि डेल इसिलोन भण्डारणको साथ एडोबसँग प्रदर्शनहरू प्रदर्शन गर्‍यो। तिनीहरूको अन-डिमांड भिडियोले मेटाडाटा पहुँचको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्यो र एक एडोब विज्ञले कसरी डेल इसिलोनले एडोबको प्रोडक्शन्स (प्रीमियरको अंश) कार्यप्रवाहमा मद्दत गरे भनेर कुरा गरे। नोट गर्नुहोस् कि २०२० मा कम्पनीको इनिलोन सर्भर र वनफोर्स प्लेटफर्मको योजना छ वनफोर्स। नेक्सटसँग। कम्पनीले अप्रिलमा भने कि यसले दुई महिनामा बढी भन्न सक्दछु।
डेलसँग एक स्लाइड पनि थियो जुन उनीहरूको डेटा पहिलो रणनीतिको बारेमा कुरा गर्दै थियो। क्लाउडहरू, निजी, बहु-क्लाउड र सार्वजनिक क्लाउडहरू बीच डाटा सार्न यो एक व्यापक रणनीति हो।
डेल IP- आधारित कार्यप्रवाह मा पर्याप्त काम गर्दैछ (SMPTE २११०) यसको उत्पादनहरू सहित। तिनीहरूको एक अनलाइन रेकर्डिंगको दौरानबाट एक विशेषज्ञ IABM औंल्याए कि एम एंड इ पेशेवरहरूले अभिलेखहरू प्रयोग गर्न थालेका छन् किनभने अभिनेताहरूसँग नयाँ फुटेज प्राप्त गर्न गाह्रो भयो। डेलले ग्रेमीटासँग कार्य गर्दछ एआई उत्पन्न मेटाडाटा मार्फत संग्रहित डाटामा सजिलो पहुँच प्रदान गर्न आईरिस प्लेटफर्म प्रयोग गरेर। तल तिनीहरूको अनलाइन प्रस्तुतीकरणको एउटा आकृति हो जुन डेलको भण्डारण प्लेटफर्म र सफ्टवेयर योजनाहरूको उच्च-स्तर दृश्य हो।
उत्सुक प्रदान गरियो M&E काम गर्न टाढाको रूपमा अनलाइन संसाधनहरू। मार्क्वीस ब्रोडकास्टले रिमोट कार्य विकल्पहरूको संयोजन प्रदान गर्दै छ उत्सुक वासाबी क्लाउड भण्डारण (ब्याकअपको लागि) र सहयोगी कार्यको साथ नेक्सिस भण्डारण।
स्पेक्ट्रा तर्क M&E उद्योगमा संग्रह भण्डारणको प्रदायकको रूपमा राम्रोसँग स्थापित छ। तिनीहरूको मा भर्चुअल एनएबी प्रस्तुतिकरण उनीहरू आफ्नो ब्ल्याकपर्ल वस्तु भण्डारण गेटवेका लागि उन्नत प्रयोगहरू देखाउँदै थिए। ब्ल्याकपर्ल स्पेक्ट्राको कन्भर्ज्ड भण्डारण प्रणालीको आधार हो जुन सार्वजनिक र हाइब्रिड क्लाउड, बहु-साइट भण्डारण साथै एचडीडी-आधारित वस्तु भण्डारण र चुम्बकीय टेप लाइब्रेरी भण्डारणको जडान समावेश गर्दछ।
२०१ NAB एनएबीमा प्रस्तुत गरिएको रियोब्रोकर डाटा मोभर र जडान ईन्जिन हो। यसले मेटाडाटा थप्न र सामग्रीसँग अनुक्रमणिका लागि अनुमति दिन्छ र ब्ल्याक पर्ल र आंशिक फाइल रिकभरीमा माइग्रेसन ईन्जिन प्रदान गर्दछ। यसले सार्वजनिक क्लाउडमा वा बाट डाटाको आवागमन समावेश गर्दछ। रियोब्रोकर नोडहरू थप्दै ग्लोबल नाम ठाउँको साथ उपलब्धता र क्षमता बढाउन थप्न सकिन्छ। स्पेक्ट्राको StorCycle तपाईंको सबै जडित भण्डारण सम्पत्तिहरूको शिक्षित व्यवस्थापनलाई अनुमति दिन्छ।
वासाबीले एमएन्डइलाई कम्पनीको कम लागतको क्लाउड भण्डारणको लागि केन्द्रित बजार बनाएको छ। कम्पनीले उनीहरूको परियोजनाहरूको भागको रूपमा क्लाउड भण्डारण वितरण गर्न धेरै च्यानल साझेदारहरूसँग काम गर्दछ। कम्पनी भन्छ कि कुनै पनि 3rd पार्टी AWS S3- संगत अनुप्रयोग वा प्लेटफार्म वासाबी भण्डारणको साथ काम गर्नुपर्दछ। कम्पनीले भन्यो कि २००+ अनुप्रयोगहरू तल दर्शाईए अनुसार वसाबी इन्टरओपरेबलको रूपमा सूचीबद्ध छन्। कम्पनीले आफ्नो हार्डवेयर टेक्नोलोजीको साथ एक आधुनिक उद्देश्यले निर्मित फाईल प्रणालीको प्रयोगले एक्साबाईट-पैमाने भण्डारण प्रदान गर्दछ।
कम्पनीसँग-5.99 / TB / mo को लागि कुनै एप्रेस्स शुल्क छैन र एपीआई कलहरूको लागि कुनै शुल्क छैन। २०२० मा वासाबीले month 2020 per प्रतिमाह भुक्तानीको रूपमा तपाईलाई भुक्तान प्रस्ताव गरे वा T० टीबीदेखि १० पीबीसम्म आरक्षित भण्डारण क्षमता १.5.99 वा years बर्ष भन्दा बढि निश्चित भुक्तानको साथ अगाडि भुक्तानीको साथ प्रस्ताव गरे कम्पनी भन्छ यसको भण्डारण सुरक्षित छ र उच्च स्थायित्व र उपलब्धता संग र मोशन पिक्चर एसोसिएशन अफ अमेरिका अनुपालन।
वसाबीसँग एलए मा १ विल्शायरमा १०० टीबी वासाबी बल स्थानान्तरण उपकरणको साथ ठूलो स्थान सामग्रीको सजिलो ईजेस्ट गर्न सह-सुविधा सुविधा छ। कम्पनीको युएस पूर्वी तटमा युरोप (एम्स्टर्डम) र एशिया (जापान) मा पनि भण्डारण छ। थप रूपमा वासाबी १ र १० GbE समर्पित जडानहरू उनीहरूको क्लाउड भण्डारणको लागि खुला छ।
ब्याकब्लेज, अर्को कम लागतको क्लाउड भण्डारण कम्पनीले एम एंड ई स्पेसलाई लक्षित गर्दै घोषणा गर्‍यो कि यसले नयाँ, S3 कम्प्याटिवल एपीआईको विमोचनको साथ विशाल S3 इकोसिस्टमलाई समर्थन गर्दछ।
यसको मतलब यो हो कि सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू सजिलैसँग अन्य क्लाउड भण्डारण विक्रेताहरूबाट सजिलैसँग सस्तोमा जान सक्दछ कम महँगो B2 क्लाउड भण्डारणको ब्याकब्लाजमा। ब्याकब्लाजको प्रक्षेपण आईबीएम एस्पेरा द्वारा समर्थित छ द्रुत डेटा स्थानान्तरणको लागि र दूरी भरि स्ट्रिमि .को लागि क्वान्टम क्याप्चर गर्न, सिर्जना गर्न र डिजिटल सामग्री साझा गर्नको लागि ब्याकब्लेजसँग काम गर्दछ। भर्खरको ब्याकब्लाजेले भने कि उनीहरूसँग उनीहरूको क्लाउडमा एक्बाबाइट भण्डारण भन्दा बढी छ।
वस्तु मेट्रिक्स मिडिया र मनोरन्जन अनुप्रयोगहरूको लागि वस्तु भण्डारण प्रदान गर्दछ। कम्पनी भन्छ कि "वस्तु म्याट्रिक्स समाधान प्रदान गर्नमा केन्द्रित छ जसले रचनात्मक र उत्पादन टोलीलाई कामबाट वा टाढाबाट कहिँ पनि सामग्रीको पहुँच गर्न स्व-सेवा गर्न सक्षम गर्दछ।" यसले दूर M & E कार्यप्रवाह र सहयोगको साथ मद्दतको लागि अनलाइन अभिलेखबाट सामग्रीमा स्व-सेवा पहुँच प्रमोट गर्दैछ।
Editshare जुलाई १ सम्म यसको फ्लो रिमोट मिडिया व्यवस्थापन प्लेटफर्म निःशुल्क बनायोst क्रमशः घर बाट रचनात्मक पेशेवर काम गर्ने सहयोग गर्न। कम्पनीको २०२० नेबमा बादलमा भिडियो उत्पादनको लागि र्याम्प प्रदान गर्ने कुरामा मुख्य ध्यान थियो। यसले नयाँ ईएफएस र फ्लो टेक्नोलोजीलाई क्लाउडमा अन्त्य देखि अन्त उत्पादनलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोगी कार्यप्रवाहहरूको लागि एडोब प्रीमियर प्रो जस्ता रचनात्मक उपकरणहरू र अभिलेखागारहरूलाई समृद्ध बनाउन एआईको व्यावहारिक अनुप्रयोगहरूसँग गहिरो एकीकरणसँग समर्थन गर्दछ। ईएफएसभी एक नयाँ प्लेटफर्म हो जसले भर्चुअलाइज गरिएको भिडियो सम्पादन र भण्डारण गर्दछ जुन कम्पनीले ग्राहकहरूलाई निर्बाध कार्यमा प्रवाहितबाट क्लाउडमा अप्टिमाइज्ड रिमोट प्रोडक्ट वर्कफ्लोमा ट्रान्समिशन गर्न मद्दत गर्दछ।
कम्पनीले भने कि “EFS २०२० शक्ति छिटो हुन्छ सम्पादन गर्नुहोस् भण्डारण नोडहरू र नेटवर्कहरू आधारमा, क्लाउडमा र हाइब्रिड कन्फिगरेसनहरूमा। फ्लो २०२० सँग पूर्ण रूपले उपयुक्त, ईएफएस २०२० ले मिडिया संगठनहरूलाई व्यापक सहयोगी कार्यप्रवाहहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ, अन्तर्निहित टेक्निकल जटिलताबाट रचनात्मक कर्मीहरू जोगाउँदै मिडिया व्यवस्थापन उपकरणहरूको विस्तृत सेटको साथ प्राविधिक टोलीहरूलाई सुसज्जित।
स्केल लॉजिकले यसको क्लाउड सक्षम एनएएसको बारेमा छलफल गरे जुन कम्पनीको नयाँ एनभीएम आधारित एनएक्स २ / जेडएक्सको साथ जहाजको सिnc्क, ब्याकअप र स्थानीय टेप लाइब्रेरी वा क्लाउड लाइब्रेरीमा संग्रहको साथ प्रमुख पोष्ट-उत्पादन उपकरणहरूसँग काम गर्न सक्दछ।
विभिन्न अन्य कम्पनीहरूले क्लाउड कार्यप्रवाह सम्बन्धित प्रस्तावहरू सहित Masstech कार्यप्रवाहहरूमा क्लाउड भण्डारण सहित र टाढाको सम्पादनको सुविधाको लागि मद्दत प्रदान गर्दै। कम्पनीले भने कि यस उत्पादनले साना, मध्यम र ठूला भिडियो उत्पादन कार्यप्रवाहहरूको लागि एक उपकरणमा सबैको साथ रिमोट सम्पादन सक्षम गर्दछ।
COVID महामारीले रिमोट मिडिया र मनोरन्जन कार्यप्रवाहहरूमा प्रवृत्ति छिटो बनाईएको छ, रिमोट सहयोगले एम एन्ड इ पेशेवरहरू र उनीहरूका रोजगारदाताहरूलाई व्यवसायमा राख्दै। स्थानीय भण्डारण उत्पादनहरू गइरहेका छैनन् तर टाढाको कार्यप्रवाह सक्षम गर्न सामग्री साझेदारी र विश्लेषण गर्न अझ आवश्यक छ। क्लाउड-आधारित उपकरणहरू भविष्यका मिडिया प्रोजेक्टहरूको एक आवश्यक हिस्सा बन्नेछ, संकर र सार्वजनिक क्लाउड भण्डारणको उपयोग बढाउँदै।
टम कफलिन, राष्ट्रपति, कफलिन एसोसिएट्स एक डिजिटल भण्डारण विश्लेषक र व्यापार र प्रविधि परामर्शदाता हुन्। उनले विभिन्न कम्पनीहरूमा ईन्जिनियरि and र व्यवस्थापन स्थितिको साथ डाटा भण्डारण उद्योगमा years। बर्ष भन्दा बढी छ। कफलिन एसोसिएट्स परामर्श लिन्छ, पुस्तकहरू र बजार र टेक्नोलोजी रिपोर्ट प्रकाशित गर्दछ र डिजिटल भण्डारण उन्मुख घटनाहरूमा राख्छ। उहाँ नियमित भण्डारण र मेमोरी योगदानकर्ता हुनुहुन्छ forbes.com र M&E संगठन वेबसाइटहरू। उहाँ एक आईईईई फेलो, आईईईई-संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूत-राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र एसएनआईए र सँग सक्रिय हुनुहुन्छ SMPTE। टम कफलिन र उनका प्रकाशनहरू र गतिविधिहरूमा अधिक जानकारीको लागि www.tomcoughlin.com.
 २०१० मिडिया र मनोरन्जन रिपोर्टमा डिजिटल भण्डारण, कफलीन एसोसिएट्स, २०१ 2019, tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-enter પ્રવેશ-report/
अघिल्लो: TVU नेटवर्क कन्सोर्टियममा सामेल हुन्छ अमेरिकाको अन्तरिक्ष एजेन्सीले ऐतिहासिक वाणिज्यिक स्पेस सुरुवातको अधिकतम प्रत्यक्ष कभरेज उपलब्धता प्रदान गर्दै।
अर्को: PSSI सफलतापूर्वक इंजीनियर्स जटिल प्रसारण अमेरिकी आइडल फिनालेको